Maaamulka Hirshabeele oo albaabada isugu dhuftay isbitaalka degmada Jowhar – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maaamulka Hirshabeele oo albaabada isugu dhuftay isbitaalka degmada Jowhar
Maamulka Hirshabeele ayaa gabi ahaanba albaabada isugu dhuftay isbitaalka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe, halkaas oo ay gacanta ku haysay hay’adda INTER SOS, xilli halkaasi ay bukaanno badan jiifeen.
Waxaa isbitaalka tagey ciidamada ammaanka maamulka Hirshabeele, kuwaasi oo dadka ku amray inay faarujiyaan isbitaalka, waxaana sidoo kale ay ciidamada xabsiga dhigeen Xasan Mahad Cabdi oo ahaa madaxii isbitaalkaasi.
Sidoo kale, waxaa socda dedaallo badan oo ay bilaabeen waxgaradka Jowhar oo ay ku doonayaan in dib isbitaalka loogu furo, waloow illaa iyo hadda maamulka Hirshabeele aanu caddeyn sababta loo xiray isbitaalka Jowhar.
Dhanka kale, waxaa jira warar hoose oo sheegaya in maamulka uu doonayo in Isbitaalka uu ka guuro halka uu deggan yahay, iyadoo aan la ogeyn waxa maamulka halkaasi ka dhigan rabo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa isbitaalka degmada Jowhar adeegyo caafimaad ka heli jiray shacabka ku dhaqan gobolka Sh/dhexe, iyadoo dadka ku xanuunsanaa isbitaalkaasi haatan loo qaaday xaafadahooda.